Shiinaha Mashiinka No: Soosaarida Shiinaha Q91Y Taxanaha Haydarooliga qashinka birta ah ee culus mashiinka mashiinka xiirista iyo alaab-qeybiyeyaasha | Midow Sare
Model Q91Y Taxanaha
Max Goynta Force 250-1250Ton
Dhererka daabka 1600-2000mm
Howlgalka Xakamaynta otomaatiga ah
Mashiinkayaga taxanaha Q91Y ee Haydarooliga culeyska culus ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhammaan noocyada kala duwan ee birta qashinka adag, qashinka culus, birta khafiifka ah iyo khafiifka ah, qolofka gaariga, birta ka samaysan qaab dhismeedka biraha qafiifka ah, muuqaalka, wax soo saarka iyo birta duugga nolosha, dhammaan noocyada birta ah ee birta aan birta ahayn (birta birta ah, aluminium ka sameysan, naxaasta, iwm.) Baakadaha isku xoqidda iyo xiirashada si ay ula kulmaan qeexitaannada khuseeya ee masruufka, Q91Y taxanaha mashiinka mashiinka xiiridda culus ee mashiinka adag ee qashinka ah ayaa ah mid ku habboon qalabka birta, warshadaha dhalaaliya biraha nonferrous, warshadaha macdanta iyo saarayaasha alaabta ceeriin.
Mashiinka xiiraya qashinka culus ee Q91Y Haydarooliga ayaa sidoo kale leh shaqooyinka loo yaqaan 'extrusion extrusion', kaas oo ka dheereyn kara tiro bir ah oo duug ah oo aan caadi ahayn oo ku jira sanduuqa wax lagu xiirayo, ka dib marka la isku daro iyo xiirashada birta duugga ah ee jaban, lakabka miridhka dusha sare iyo walxaha kale ee waxyeelada leh ayaa noqon kara qayb ahaan diiray, hagaajinta nadiifnimada birta duugoobay. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu xiirto qashinka culus ee cabirrada kala duwan. Q91Y taxanaha mashiinka xiirida culus ee mashiinka korontada ku shaqeeya wuxuu gabi ahaanba beddeli karaa jarista ololka. Waa amaan oo hufan in lagu quudiyo mashiinka wax lagu qabto birta ama gawaadhida forklift.
Q91Y taxanaha mashiinka dhogorta culus ee birta ah ee mashiinka culus wuxuu qaataa saxanka birta ee isku dhafan, mashiinku wuxuu leeyahay qallafsanaan sare, qaybaha alxanka ee daaweynta dabiiciga ah ee gaboobay, ka takhalus walwalka walxaha, mashiinka saxda ah ee wanaagsan, xasilloon.
Bla Mashiinka laga sameeyay birta aaladda jarista wuxuu leeyahay cimri dheer iyo adkeysi.
● Nadiifinta daabku waa la hagaajin karaa, taas oo hagaajinaysa saxsanaanta shaqada ee qalabka mashiinka iyo nolosha adeegga ee daabku.
Frame Qaabdhismeedka ugu weyn ee sanduuqa maaddadu wuxuu ka samaysan yahay bir qaabdhismeed la isku qurxiyay, gidaarka sanduuqa gudihiisana wuxuu ka samaysan yahay saxan bir ah oo loo yaqaan 'NM500 steel plate' oo leh iska caabbinta astaamaha aadka u sarreeya, oo xusaya caabbinta xirnaanta sanduuqa maaddada. Dhaqdhaqaaqa madaxa riixaya ee sanduuqa maaddada waxaa wada nidaam hawo madaxbannaan, iyada oo loo marayo mashiinka hidda iyo silsiladda. Cabirka maaddada riixitaanka si otomaatig ah ayaa loo xakameeyaa, waxayna leedahay astaamaha ilaalinta ka hortagga culeyska badan ee la isku halleyn karo.
Nidaamka Haydarooliga oo leh xuquuq aqooneed oo madax banaan iyo nashqadeyn madax banaan. Mashiinka weyn ee xiiriddu wuxuu qaataa wareegga kaladuwan si uu u siiyo ciyaar buuxda shaqada nidaamka tamarta firfircoonida. Nidaamka Haydarooliga oo dhami waa mid iswaafajinaya oo nidaamka dhuumaha ayaa macquul ah, taas oo yareyneysa isticmaalka kala-goysyada tuubbada iyo xusullada, sidaas awgeedna ay yareyneyso cunsuriyadda kuleylka ee nidaamka shidaalka iyo in si hufan loo hubiyo hawlgalka caadiga ah ee lagu kalsoonaan karo ee nidaamka haydarooliga.
Design Naqshadaynta taangiga saliida, mugga macquulka ah, qalafsanaanta qaabdhismeedka sare, dekedda soo celinta saliida iyo dekedda nuugista saliida waxaa lagu kala qaybiyaa qayb ahaan, si wax ku ool ah u yareeysaa kuleylka saliidda hidda.
●Q91Y taxanaha hiddaha culus ee mashiinka xoqidda mashiinka culus wuxuu adeegsadaa isku-xojinta sare iyo isku-xoqidda labada dhinac ee isugeynta iyo habka quudinta qaybsan, qaabeynta sanduuqa maaddada ballaadhan, sidaa darteed ku-habboonaanta alaabta ceeriin duug ah way wanaagsan tahay, cufnaan badan ka dib xiirista.
Area Meesha furitaanka ee sanduuqa maaddada waa weyn yahay, oo ku habboon qalabka wax lagu farsameeyo, qashinka culus ee dabacsan, qashinka birta fudud iyo khafiifka ah, qolofka gawaarida, qaabdhismeedka birta fudud ee aan caadiga ahayn, biibiile bir ah, saxanka birta, birta kanaalka, I steel, baarka birta iyo astaamaha kale ee xiirashada, ee u fudud sanduuqa maaddada, si buuxda u weyneeya heerka isticmaalka qalabka.
● PLC xakamaynta tooska ah ee taabashada shaashadda xakamaynta shaashadda otomaatigga ah, iyo nidaamka xagjirka ah ee geedi socodka oo dhan, oo ku habboon isticmaalayaasha si ay u xakameeyaan una adeegsadaan habka qalabka raadraaca oo dhan. Hawlgal xasilloon oo lagu kalsoonaan karo, qalab ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo wireless ah, qalabka wax soo saarka hal kalkaaliyaha qalabka wax soo saarka.
Mashiinka mashiinka xijaabka birta ah ee qashinka culus ee mashiinka adag ee loo yaqaan 'Q91Y' wuxuu adeegsadaa xakamaynta qulqulka qulqulka badan ee la isku halleyn karo, sifeynta madaxbanaan iyo nidaamka qaboojinta, wuxuu hubin karaa nidaamka wax ku ool ah oo xasilloon. Codsiga dhammaystiran ee isbeddelka awoodda joogtada ah iyo tiknoolajiyada dhakhsaha kala duwan ayaa badbaadin kara qiyaastii 30% iyadoo la hubinayo wax soo saarka, iyo isticmaalka tamarta halkii tan ee wax soo saarka birta duugga ah ayaa ka hooseeya shuruudaha heerka warshadaha.
Max Goynta Force (Ton)
Cabbirka qolka (mm)
Dhererka daab (mm)
Joogtaynta Xiirashada （jeer / daqiiqo）
Qalabkayaga taxanaha ah ee loo yaqaan 'H9 Haydarooliga' oo ah mashiinka xarkaha culus ayaa bixiya qaybo caan ah oo caan ah, waxaan la shaqeynay shirkado badan oo caan ah oo caan ah, sida SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI iyo wixii la mid ah in ka badan 10 sano
Mashiinka ugu yar ee Q91Y mashiinka xiiraha culus ee mashiinka adag ayaa si fiican loogu ilaalin karaa hal weel 40 HQ. Haddii doon lagu raro, waxaan dabooli doonnaa poncho iyo Load dusha si aan u ilaalino mashiinka qashin-qubka birta ah ee qashinka culus ee Q91Y.
Daawo taxanaha Q91Y Haydarooliga culus ee mashiinka xiirista birta ee jarista biraha ficil ahaan!
Hore: Qaab No: Maareynta Buugga Soosaarida Shiinaha Q43 Taxanaha Qalabka Mashiinka Qalabka Birta ah
Xiga: Qaab No: Soosaarida Shiinaha Is-xakameyn otomaatig ah Y83 Taxanaha Haydarooliga Birta Chip Briquetting Mashiinka Mashiinka ee Dib-u-warshadaynta Birta
Sheet Birta Baler, Mashiinka Birta Briquette, Horjooge Baler Aluminium Iskaraab Aluminium ah, Sheeko Gaab ah oo loogu talagalay Mobile Digger, Mashiinka Haydarooliga / Aluminium Wuu Cadaadi Karaa Mashiinka, Baler Xadhig Baler,